Ogaden News Agency (ONA) – Raisal Wasaaraha Cusub ee Gumeysiga Ethiopia Vs Xaaski Malise oo Guri isku heysta
Raisal Wasaaraha Cusub ee Gumeysiga Ethiopia Vs Xaaski Malise oo Guri isku heysta
Raisal wasaariii Cusbaa ee badalay Kaligi taliye Zenawi waxaa loo diiday innuu guriga madaxtooyada dago halkaas oo ay ku nooleyd xaaski Malise.
Warbaahinta Caalamka ayaa soo bandhigtay guri la’aanta heysata Raisalwasaaraha cusub ee gumeysiga Ethiopia. Waxaana loo aaneyay in Ra isal wasaaruhu uusan aheyn nin awood leh oo aan amarkiisa iyo rabitaankisa toona waxba ku fuli karin, Waxaana muddo dheer labaryayay oo odeyada Tigreega loo diray inay lasoo hadlaan Xaaski Malise oo iyadu ah qofka dagan guriga Madaxtooyada.
Azeb ayaa sheegatay inaysan ka guurayn guriga madaxtooyada oo ay sheegtay inay dhaxal u leedahay iyadu. Waxayna Azeb rajeynaysay in iyadu ay iyadu xaq u laheyd in booska Ra’isal wasaaranimo lasiiyo maadama ninkeedi Malise sidaas jeclaa. Waxayna aaminsantahay in xubno kale oo tigree ahi ay arrintan ka danbeeyeen in madaxtooyada loo gacan galiyo cid kale.
Dood dheer iyo wadahadalo kadib waxaa lagu guuleystay in Aseb laga saaro gurigi madaxtooyada. Waxaana lagusoo waramaya in doodaas ay socotay muddo ka badan 5 todobaad.
Hadaba idaacada VOA ayaa shaacisay in raisal Wasaaraha cusub ee Gumeysiga Ethiopia oo qabiil ahaan aheyn nin tigree ah innuu kusoo wareegay guriga madaxtooyada oo ku yaala Magaalada Addis Ababa. Waxa uuna noqday ra’isal wasaarihi ugu horeeyay ee muddo guri la’aan usoo shaqo tagayay madaxtooyada. arintan oo caalamka aad uga yaabisay waxay caddeyn u tahay xukunka lakala maroorsanayo iyo burburka ka jira talada kore ee gumeysiga Ethiopia.